'Qarreefi Qeerroon OSA biyya akka galuuf haarsaa kanfalan galata qabu' - BBC News Afaan Oromoo
"Waldaan Qorannoo Oromoo (OSA)n waggoota 33 booda akka biyyatti galuuf kan haarsaa kanfalan Qeerroofi qarreen Oromoo galata qabu," jedhan pirezidaantiin OSA Kuulanii Jaalataa.
Pirezedaantiin waldichaa Kuulanii Jaalataa konfaransii Jimaata dhufu Magaalaa Finfinneetti eegalamu ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniin ture kana kan dubbatan.
Konfaransii Adoolessa 26-28 Finfinneetti gaggeefamu kanarrattis qorannoowwan ragaa qabatamaa irratti hundaa'anii fi beekumsa uummata keessaa walitti itichuun ijaarsa Oromiyaafi biyyaatiif gumaatan ni dhiyaatu jedhan.
Waldichi erga hundaa'ee kaasee baqa irra waan tureef, hayyoota biyya keessaa haala barbaadamuun hirmaachisaa akka hin turres eeran.
"Konfaransiin yeroo jalqabaaf Finfinneetti gaggeefamu kunis qorannoowwan biyya keessaafi alaa walitti fiduu qofa osoo hin taane, gartuuwwan, yaadotaa fi hayyoota Oromoo gama lamaan jiranis bakka tokkotti hirmaachisa," jedhan.
Dura taa'aan boordii OSA Piroofeesar Asfaaw Bayyanaa gamasaaniin, jijjiirama biyyaattii keessatti dhufeen waldaan kunis gara handhuura isaatti akka deebi'u taasisuu dubbatan.
Waldicha biyya keessatti seera qabeessa taasisuuf adeemsi jalqabame saffisa yaadameen deemaa jiraachuu baatus adeemsichi itti fufuu himan.
Konfaransii guyyoota sadiif turu kanarratti hayyoonni biyya keessaafi biyya alaa akkasumaas kanneen dhimma Oromoo irratti qorannoo jabaa gaggeessan kan akka Piroofesar Asmiroom Laggasaa dabalatee, kanneen dhimma Oromoo irratti qoratan akka hirmaatan ibsa kanarratti eerame.